TAARIIKHDA SAMAYNTA XEERKA CIISAHA | shiniilenews.com
Monday, March 4th, 2013 | Posted by Shiniile
TAARIIKHDA SAMAYNTA XEERKA CIISAHA
Beesha ciisaha oo ah beelaha leh xeer qoran oo soo jireen ah ayaa waxa la soo weriyey in ay keentay in ay samaystaan xeer dardaaran hore oo ay qabeen.
Cali Abokor Maxamuud Yuusuf Ciise. Ayaa iskugu yeedhay Ciise wuxuuna yidhi waa kii aabaheen inoo dardaarmay ee yidhi ‘ markaad noqotaan boqol gaashaan qaada Samaysta xeer iyo boqor’ markaa waa in aynu samaysanaa Xeer aynu ku dhaqano iyo boqor ina maamula.
maalinki qabashad ogaas mustafe
Halkaana waxaa lagu doortay gandihii ugu horeeyey waxayna fadhiisteen dixda Salal waxayna halkaa ku doorteen Ugaas kii ugu horeeyey waxayna ku heshiiyeen Dhuuni ( biyo,daaqa, iyo martida) saddexdaa qodob ayey go’aamiyeen in aan la isku diidi karan.
Xeerka ka hadalkiisu mudo badan ayuu socday waxaana la fadhiistay meelo badan iyo wakhtiyo kala duwan waxaana ka mida. Dixda Salal, Gargaara, Kartataan, Carowayn iyo ugu danbayntii oo xeerka lagu lafo guray Gunburta Siti.
Wakhtigii la jabiyey Ciidamadii Axmad guray Dadka muslimiinta ee Sooamaalida waxa ku dhacay dhibaato wayn. Dadkii magalooyinkii way ka qaxeen waxayna u baxeen baadiyaha.
Mudo markii sida lagu jiray ayaa Xasan gadiidshe uu ciisihii iskugu yeedhay in ay isku yimaadaan Ayna habeyaan xeerkoodii si ay dadka aaye ugu reebaan Waxaana la fadhiistay Siti.
Gunburta Siti oo ah meeshii ugu danbaysay ee xeerka loo fadhiisto laguna habeeyo ayaa waxaa la doortay 44 Gande ku waas oo mudo sanad ah halkaa fadhiyey kana hadlay waxwalba . Gandaha halkaa fadhiyey waxay lahaayeen rag culumo ah oo Cilmiga Fiqiga yaqaanay kana ilaalinaayey wax walba oo Shareecada Islaamka ka soo horjeeda ,waxa ku jiray Afar nin oo amnigooga ilaanaayey. Gandaha wakhtigaa waxaa loo yaqaanay Ayo